Fanjonoana " Journey-Assist - fitsangatsanganana jono. Endri-javatra.
Ny fitsangatsanganana fanjonoana dia fomba fialam-boly fizahan-tany, ny tena tanjon'izany dia ny misambotra trondro isan-karazany sy mponina hafa amin'ny rano. Ny fizahan-tany toy izany dia sady jono no fialamboly. Mampiseho ny statistika fa olona maro izay nahatratra haavo sasany (mpandraharaha, mpahay siansa, mpanao politika) dia mpankafy fanjonoana fatratra ary be mpitia.
Ny fitsidihana jono dia safidy voalamina tsara ho an'ny fialam-boly mavitrika. Orinasa fitsangatsanganana maro no mampiditra fitsangantsanganana toy izany ao amin'ny lisitry ny serivisy omena hisarika mpanjifa betsaka araka izay tratra. Matetika, ity fitsidihana ity dia misy ireto serivisy manaraka ireto:
Ny tsara indrindra dia ny manomboka mifantina fitsangatsanganana jono mifototra amin'ny vanim-potoana. Mazava ho azy, anio dia tsy sarotra mihitsy ny miala amin'ny fahavaratra mankany amin'ny ririnina na ny mifamadika amin'izany. Noho io antony io, ny dingana voalohany dia ny mamaritra ny vanim-potoana irina. Mila manapa-kevitra ianao amin'izay karazana jono tianao - ririnina, amin'ny toerana mafana na amin'ny toetr'andro milamina sy mahonon-tena. Rehefa nanapa-kevitra momba ity fepetra ity ianao, dia azonao atao ny manala avy hatrany ny lisitra firenena maromaro tsy mifanaraka amin'ny fanirianao.
Betsaka ny firenena manome fitsidihana jono, ary samy manana ny toetrany avy ny toetrandro. Ireo firenena fanjonoana amin'ny toetrandro mafana (na marobe) dia ahitana an'i Russia, Kazakhstan, Ukraine. Firenena mangatsiaka ho an'ny jono mpizahatany - Soeda, Failandy, Norvezy, Islandy. Thailandy sy Israel dia malaza eo amin'ireo firenena manjono mafana.
Ny fepetra manaraka dia ny haavon'ny maha-matihanina manokana amin'ny sehatry ny jono. Zava-dehibe ho an'ny sasany ny mandany ora maro mitady trondro iray, fa ny sasany kosa maniry ny hitsambikina irery eo an-tànany ireo trondro irina. Ireo faniriana roa ireo dia mety ho afa-po mora foana amin'ny alàlan'ny maso ivoho mpitety faritany.
Aorian'izany dia tokony hieritreritra ny toerana tena ipetrahanao ianao. Mety ho hotely ahazoana aina, trano kely amoron-tsiraka, trano kely na tranolay. Zava-dehibe amin'ny teti-bola izany ary koa ny traikefa amin'ny dia. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny karazana reservoir sy ny natiora manodidina. Sehatra mahafinaritra sy mpifaninana vitsivitsy no isan'ny fepetra lehibe ilaina.
Eto amin'ity firenena ity no misy ny farihy madio indrindra. Malaza be eto ny jono. Ny fitehirizan-drano malaza indrindra amin'ny fitsidihana jono dia ny sisin'ny failandy sy botanika. Manolotra fanjonoana mahafinaritra, fahitana mahagaga ary fitiavana mandray vahiny any Finnish izy io.
Ny jono eto amin'ity firenena ity dia tsy mamela ny mpanjono tena tsy miraharaha. Eto dia azo antoka ny trondro na dia ho an'ny vao manomboka aza. Norvezy dia tena paradisa ho an'ireo tia fanjonoana amin'ny farihy, ranomasina ary ony. Tsy misy isalasalana fa hahazo trondro be dia be ianao ary hahazo fihetseham-po be, satria tratra eto mandritra ny taona ny trondro. Ny antony mahatonga an'io dia mitoetra eo amin'ny endrika ara-jeografika sy ireo tahiry trondro be ao amin'ny ranomasina. Ny jono avy amin'ny sambo dia mahazatra eto kokoa noho ny avy any amoron-tsiraka. Ankoatry ny jono, dia afaka miala sasatra be ianao rehefa mankafy ny kolontsaina eo an-toerana, ny sakafo norveziana ary ny majika.
Russia dia firenena manana faritany midadasika. Noho ny halavany tsy mampino, dia afaka manome fahafaham-po ny fepetra takian'ny mpanjono mahay manavaka izany. Rehefa misy fanala mahery any amin'ny faritra avaratra misy azy, mandritra izany dia azonao atao ny manjono ranomandry, voninkazo ny faritra atsimo, ka manjono amin'ny rano misokatra ny mpanjono. Ny salmon amam-borona goavambe dia miditra amin'ny renirano Rosiana, ary misy pike nify hita any amin'ireo farihy. I Siberia dia malaza amin'ny fihazonany taimen. Noho izany, ny mpanjono rehetra any Russia dia afaka mahita farihy, ranomasina na renirano mifanaraka amin'ny tsirony.
Ny jono dia tsy fialamboly ankafizin'ny olona (indrindra eo amin'ny lehilahy), fa koa fomba iray miala sasatra mandritra ny fialan-tsasatrao. Ireo tia jono maniry ny hiala sasatra amin'ny alàlan'ny fizotry ny jono voalamina tsara dia afaka mifandray amin'ny orinasan-dia izay hanome safidy ho an'ny dia toy izany any ivelany.